देशै हँसाउनेलाई कसले हँसाउने ?- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
देशै हँसाउनेलाई कसले हँसाउने ?
मंगलबार प्रकाशित कला र शैलीमा ‘झन् हँसिला मदनकृष्ण’ पढ्दा हामी बाँचेको जीवन त अति स्वस्थ र आनन्दित रहेछ भन्ने लाग्यो  । बाल्यकालदेखि नै मदनकृष्णको नाटक, सिनेमा हेर्दै अनि गीतहरू सुन्दै जीवनमा धेरै नयाँ आशाहरू बटुल्दै आएको मेरो मानसपटलमा प्रसिद्ध हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको मेसिनरूपी जीवनगाथाका बारेमा फरक सोच र चिन्तन पैदा गरायो  ।
हामी प्रायः आफ्नै भलो चिताउने र सकेमा आफन्तको भलो चिताउने गर्छौं, जीवन र जगतका ठूलठूला कुरा अनुभव गर्छौं र हासिल पनि गर्छौं । अनि समयसीमा पार गरेपश्चात बिलाउँछौं । सबै कुरा अरुलाई हस्तान्तरण गरेर फर्कन्छौं । मानिसले गर्ने यति नै हो । तर कति थोरै मानिसलाई भने अरुको जीवनमा फरक पार्ने खालको वरदान ईश्वरले नै दिएका हुन्छन् । यस्तै वरदान मदनकृष्णले पनि पाउनुभएको छ । मस्तिष्क र मुटुमा मेसिन लगाएर हामीलाई हँसाउने अनि ऊर्जा दिने मदन दाइलाई हामीले कसरी हँसाउने होला भन्ने चिन्ता लागेको छ । सायद उहाँको सीप र कलाको माध्यमबाट धेरै नेपालीले प्रेरणा र उत्साह नै पाएको हुनुपर्छ । समग्र देशको नै कलाकार र देशको गहनाको रूपमा स्थापित मदन दाइको कला र खुबीको म खुलेर प्रशंसा गर्छु र सरकार अनि आम नागरिकको संयुक्त प्रयासमा उहाँको राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रम बृहत रूपमा सञ्चालन गर्न पाए आम नेपालीको
तर्फबाट उहाँलाई सच्चा सम्मान हुन्थ्यो कि ?
– केपी अधिकारी, भैँसेपाटी, ललितपुर
प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ११:३७
तेस्रो दिनमै डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या
कार्तिक २०, २०७६ डीआर पन्त
(डडेलधुरा) — १७ औं अनशन बसेको तेस्रो दिनमै डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । अत्यधिक चिसो ठाउँमा अनशन सुरु गरेका डा. केसीको रक्तचाप निकै कम हुादा रिंगटा लाग्ने समस्या सुरु भएको हो ।
‘डडेलधुरा अस्पताल रोडको एउटा कोठामा अनशन बसेका डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सुरु भएको छ,’ डडेलधुरा अस्पतालका प्रमुख डा. जितेन्द्र काडेलले भने, ‘हिजो र अस्तीको तुलनामा उनको स्वास्थ्य स्थिति निकै कमजोर भएको छ ।’ चिसोले डा. केसीको स्वास्थ्य झन् प्रतिकुल असर पर्नसक्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
सोमबार सााझ ५ बजे अचानक डडेलधुरा पुगेका डा. केसीले स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि पटकपटक सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अनशन सुरु गरेका थिए । गत भदौमा डडेलधुरा आउादा उनले आफ्नो अर्को अनशन डडेलधुराबाट सुरु हुने बताएका थिए ।
डा. केसीको अनशनको समर्थनमा डडेलधुरामा नागरिक समाजले विभिन्न पक्षसाग छलफल पश्चात र्‍याली, सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र अन्य दबाबमुलक कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ ।
‘जनताको अधिकारका लागि डा. केसीले सुरु गरेको अनशनलाइ समर्थन जनाउादै दबाबमूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ नागरिक समाज डडेलधुराका अध्यक्ष रमेश जोशीले भने, ‘बुधबार देखि नै केसीको समर्थनमा दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरिने छ ।’
प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ११:२९